Funda izizathu zokuba kutheni iMithetho ikhona kuMbutho
Kutheni sifuna iMithetho ekhoyo kuMbutho
Imithetho ikhona kwizizathu ezihlanu ezisisiseko, kwaye zonke ziyakuthi zisebenzise kakubi. Ngezantsi, funda izizathu ezinhlanu zokuba kutheni sifuna imithetho kuluntu lwethu ukuze siphile kwaye siphumelele.
UStephen Simpson / Iconica / Getty Izithombe
Imithetho eyenziwe phantsi kweMgaqo-nkqubo oMngcipheko ibhaliwe ukukhusela abantu ukuba bangalinyango ngabanye. Imithetho yokulwa nobugebengu obundlobongela kunye nolwaphulo-mthetho luya kulolu hlobo. Ngaphandle kwemithetho esemgangathweni yemithetho yeMimiselo, uluntu luye lube lukhuni lube lukhohlakeleyo-ukulawulwa kobutyebi kunye nogonyamelo kubantu ababuthathaka nabangenasidlangalaleni. Imimiselo engammiselo imfuneko, kwaye wonke urhulumente eMhlabeni unabo.
Ukongezelela kwimithetho ejoliswe ekudambiseni abantu ukuba bangalicongi, iminye imithetho ibhaliwe ukuba ingavumeli ukuzilimaza. Imithetho yooMzali imigaqo ibandakanya imithetho yokunyanzeliswa kwabantwana, imithetho echasene nokunyanzeliswa kwabantwana kunye nabantu abadala abasengozini, kunye nemithetho evimbela ukusetyenziswa kwezidakamizwa ezithile. Imithetho ethile yoMgaqo-nkqubo yabazali ibalulekile ekukhuseleni abantwana kunye nabantu abadala abasengozini, kodwa nakwiimeko, banokucinezela ukuba bengabhaliwe kwaye baqinisekiswe ngokucacileyo.
Eminye imithetho ayisekelwe ngokukhawuleza kwingozi okanye ukuzilimaza, kodwa nokukhuthaza ukuziphatha komntu wabalobi bomthetho. Le mithetho idla ngokuphindaphindiweyo, kodwa ayisoloko isekelwe kwinkolelo yonqulo. Ngokomlando, ininzi yale mithetho inento yokwenza ngesondo - kodwa iminye imithetho yaseYurophu ekuchaseni i-Holocaust kunye nezinye iintlobo zentetho yenzondo nazo zibonakala zikhuthazwa ngokukodwa nguMgaqo-siseko weMithetho.
Bonke oorhulumente banemithetho enikezela impahla okanye iinkonzo zoluhlobo kubemi balo. Xa le mithetho isetyenziselwa ukulawula ukuziphatha, kunjalo, inokunika abantu, amaqela, okanye imibutho engenakulungelelaniswa ngaphezu kwabanye. Imithetho ekhuthaza iinkolelo ezithile zonqulo, umzekelo, izipho oorhulumente abaya kumaqela enkolo benethemba lokufumana inkxaso yabo. Imithetho ijezisa ezinye iinkqubo zenkampani ngamanye amaxesha zisetyenziselwa ukuvuza iintlangano eziseburhulumenteni obuhle, kunye / okanye ukujezisa iinkampani ezingekho. Abanye abaxhasayo bathi iingongoma ezininzi zenkonzo zentlalo nguMgaqo-siseko weNkokelo ekujoliswe kuyo ukuthenga inkxaso yabavoti abancinci, abavame ukuvota iDemocratic.
Imithetho eyingozi kakhulu yilezo ezijoliswe ekukhuseleni urhulumente kwingozi okanye ukwandisa amandla ayo ngenxa yayo. Imithetho ethile ye-Statist imigaqo imfuneko, imithetho ngokuchasene nokukhwabanisa , umzekelo, kubalulekile ekuzinzileyo koorhulumente. Imithetho ye-Statist ingaba yingozi, imithetho yokukhazamisa ukugxeka urhulumente, njengeflegi evuthayo imithetho evimbela ukutshatyalaliswa kweempawu ezikhumbuza abantu karhulumente, kunokukhokelela lula kwilizwe elixinzelelekileyo kwezopolitiko eligcwele abachasene entolongweni kunye nabemi abanoyikayo bayesaba ukuthetha.
Ikhowudi Yokuziphatha kwiNkonzo kaRhulumente kaRhulumente wase-US